သင့်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ဖုန်းဘယ်လောက် အသုံးပြုဖြစ်နေသလဲ သိပါသလား? မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေ့စဥ် အင်တာနက်နဲ့ လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူ ၂၂ သန်းခန့် ရှိနေပြီး လူဦးရေ စုစုပေါင်းရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါးဟာ ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်း၊ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုခြင်း၊ ဂိမ်းဆော့ခြင်းနဲ့ အခြားဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် တစ်နေ့လျှင် ပျမ်းမျှ ၅ နာရီခန့် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အချိန်ကုန်ဆုံးလျက် ရှိကြပါတယ်။ အခုလို ရောဂါမပြန့်ပွားဖို့ နေအိမ်မှာ...
Better than, than any other smartphones ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အတူ iPhone 12 ကို မနေ့ညကပဲ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ iPhone ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာတိုင်း အားလုံးက ဘယ်လိုအသစ်အဆန်းတွေ၊ ဘယ်လိုမျိုး unique ဖြစ်တာတွေ ပါလာမလဲဆိုပြီး စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေရတာပါ။ အခုတစ်ခါမှာလည်း iPhone က လူသားတွေကို စိတ်မပျက်စေခဲ့ပါဘူး။ Launch Event...